बजेट सुनिश्चित भए लक्ष्य अनुसार नै काम सम्पन्न हुन्छ - Karobar National Economic Daily
बजेट सुनिश्चित भए लक्ष्य अनुसार नै काम सम्पन्न हुन्छ
query_builderJuly 16, 2017 10:14 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility887
इमनारायण श्रेष्ठ निर्देशक, शिक्षा मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ
भूकम्पपछि विद्यालय पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणको अवस्था कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
अहिले विद्यालय निर्माणको अवस्थाको कुरा गर्दा झन्डै एकतिहाइ विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् । भूकम्पका कारण ७ हजार ९ सय २३ विद्यालय भत्किएकोमा हामी अहिले ४ हजार २ सय विद्यालय निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौं । तर, त्यसमध्ये निर्माण सम्पन्न भएका विद्यालयको संख्या साउन मसान्तसम्म २ हजार ७ सय पुग्दै छ ।
विद्यालय पुनर्निर्माणको लक्ष्य अनुसार काम भएको छ कि छैन ?
यसमा संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने गत वर्ष राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) बाट तय भएको लक्ष्य भनेको ३ वर्ष भित्रमा विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने हो । त्यसमा पहिलो वर्ष एकतिहाइ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
यसरी नै दोस्रो वर्ष अर्को एकतिहाइ र अर्को एक वर्ष एकतिहाइ गरेर विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । अब साउन महिनामा पहिलो वर्षको लक्ष्य पूरा गर्दै छौं । यसरी पहिलो वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न सफल हुनुको कारण गैरसरकारी संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षदेखि नै शिक्षा विभागमार्पmत पुनर्निर्माणको सम्झौता गरेकाले हो । शिक्षा विभाग र एनआरएमार्पmत गैरसरकारी संस्थाले पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन ।
यसरी अहिलेसम्म लगभग १८० वटा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले सरकारलाई पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न परिचालित रहेका छन् । ती गैरसरकारी संस्थाको पुनर्निर्माणको सहयोगले सरकारलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ । अर्को चाहिँ गत वर्ष शिक्षा विभागले कम प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये १७ जिल्लामा बजेट पठाएको थियो ।
त्यो बजेट मार्पmत हालसम्म लगभग १ हजार २ सय विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसको अलवा यस वर्ष राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्पmत प्राप्त भएको ४ अर्ब रकमबाट पनि अहिले २ हजार ६२ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्पmत पैसा पठाएका छौं । त्यसमध्ये १ हजार विद्यालयले निर्माण सुरु गरेका छन् । यसरी निर्माण सुरु भएका मध्ये १ सय विद्यालय निर्माण सम्पन्न पनि भइसकेका छन् ।
यसरी नै साउन महिनाभित्र ५० विद्यालय निर्माण सम्पन्न हुँदै छन् । साउन मसान्तसम्म एनजिओबाट ९ सय, १७ जिल्लाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्पmत १ हजार २ सय गरेर २ हजार १ सय विद्यालय पुनर्निर्माण हुँदै छन् । १४ जिल्लाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्पmत ६ सय गरेर २ हजार ७ सय स्कुल निर्माण सम्पन्न हुन्छन् ।
बजेटको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?
बजेटको हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको पिडिआरएफ (पोस्ट डिजास्टर रिकोभरी फ्रेमवर्क) अनुसार विद्यालय क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा मात्र १६७ अर्ब बजेट आवश्यक छ । त्यो अनुमानअनुसार पछि लगानी घटीबढी हुनसक्ने देखिन्छ ।
यो बजेटको तुलनामा अहिले हामीसँग बजेट अर्थात् खर्च गर्ने परिस्थितिमा पुगेको पैसा एडीबी, जाइका, युएसआइडी, जिएफपिआर र नेपाल सरकारको शिक्षा विभागमार्पmतको बजेट, नेपाल सरकार एनआरएको बजेट, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको बजेट, चीन सरकार र अन्यको समेत सहयोग जोड्दा हालसम्म ४० अर्ब रुपैया सुनिश्चित भइसकेको छ । यो सुनिश्चित भएको बजेट नै अहिले खर्च हुने अवस्थामा रहेको छ ।
यसरी यो बाहेक भारत सरकारको अनुदान र ऋण (जसलाई एलओसी (लाइन अफ क्रेडिट) भनिन्छ), एडीबीको दोस्रो चरणको ऋण, युएसआइडीको टर्न की प्रोजेक्टसमेत गरेर ३१ अर्ब बराबरको सहयोग पाइपलाइनमा रहेका छन् । तर, यी सहयोगमा हस्ताक्षर हुन भने बाँकी नै छ । यसरी हेर्दा हाललाई ७१ अर्ब बजेट नेपालको विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सुनिश्चित भएको मान्न सकिन्छ ।
त्यो बाहेक आगामी वर्षका लागि नेपाल सरकारको स्रोतको बजेट माग गरिरहेका छौं । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्पmत आगामी वर्ष विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न १० अर्ब रुपैंया बजेट चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव गरिरहेका छौं । तर, सिलिङका कारण यो बजेट तथा कार्यक्रममा परेको छैन । तर पनि अर्थ मन्त्रालयले विगत वर्षको जस्तै प्रक्रियामा बजेट दिन सक्ने सम्भावना छ भनेर एनआरएबाट आश्वासन आएको छ ।
यो बजेटको व्यवस्थापन भए विद्यालय व्यवस्थापनसमिति मार्पmत आगामी वर्षमा २ हजार विद्यालय निर्माण गर्न सकिन्छ । एडिबी र जाइका मार्पmत पनि आगामी वर्ष केही विद्यालयको पुननिंर्माण सम्पन्न हुनेछ । समग्रमा अर्को आर्थिक वर्षसम्म ५ हजार २ सय विद्यालय निर्माण सम्पन्न हुनेछन् ।
विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सोचेभन्दा छिटा हुनुको कारण के हो ?
विगतको अवस्थाभन्दा छिटो बन्नुमा मोडालिटी नै कारण हो । मोडालिटीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्पmत गर्ने कामहरू तुलनात्मक रूपमा छिटो हुन्छन् । हिउँद भएकाले पनि काम छिटो भएको हो तर अब वर्षायाममा निर्माण कार्य केही सुस्त हुन्छ ।
वर्षायाममा निर्माण सम्पन्न भएको विद्यालयमा रंग र प्लास्टरको काम हुने भए पनि निर्माणको काम भने हुँदैन । यसले गर्दा साउनदेखि दशैंसम्म काम केही सुस्त हन्छ । मंसिरदेखि जेठसम्म पुनः केही दु्रत गतिमा काम हुन्छ ।
हालसम्म कति निर्माण सम्पन्न भएर र कति बाँकी रहेका छन् । त्यसको लागि कति समय लाग्ला ?
विद्यालय निर्माणमा पहिलो वर्षको लक्ष्य पूरा भए पनि दोस्रो र तेस्रो वर्षको लक्ष्य पुूरा गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ । अहिले समयमा र्नाण सम्पन्न गर्न दक्ष कामदारको अभाव रहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि कामदार अभाव रहेको गुनासो गरिरहेको छ ।
यसरी नै निर्माण सामग्रीको रूपमा सहज मानिएको बालुवा गिटीको पनि अभाव रहेको छ । असारदेखि भदौसम्म विभिन्न जिल्लामा बालुवा गिटी उत्खनन गर्न रोक लाग्ने गरेको छ । तैपनि बजेट उपलब्ध हुन सकेको अवस्थामा अर्को वर्ष २ तिहाइ (५ हजार २ सय) विद्यालय निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको १० अर्ब रुपैया आउने नआउने सुनिश्चित छैन ।
पुनर्निर्माण भूकम्प नवनिर्माण